'स्वतन्त्रता' खोज्दै नक्कली राहदानीमा नेपाल आएका हुन् इरानी नागरिकहरू - BBC News नेपाली
'स्वतन्त्रता' खोज्दै नक्कली राहदानीमा नेपाल आएका हुन् इरानी नागरिकहरू
युरोपेली मुलुक स्लोभिनियाको राहदानी बोकेका एक दम्पती झन्डै दुई महिनाअघि टर्कीको इस्तानबुलबाट आएको एउटा विमानबाट काठमाण्डूस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लिए।
उनीहरूका साथमा १४ र चार वर्षका छोराहरू पनि थिए।
चारै जनासँग युरोपेली राहदानी भएकाले विमानस्थलस्थित नेपाली अध्यागमन कर्मचारीहरूले 'आगमन'को छाप लगाइदिए।
उनीहरू सबैले नेपालमा पर्यटकको हैसियत पाए।
केही दिनपछि उनीहरू स्लोभिनिया जान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबई उडे।
यस्तो बहाना बनाएर गैरकानुनी रूपमा बस्छन् नेपालमा विदेशी
विदेश जादै हुनुहुन्छ? तपाईँको 'निगरानी' हुनेछ
अध्यागमन अधिकारीलाई कारवाही गर्न निर्देशन
दुबई उड्नुअघि विमानस्थलस्थित अध्यागमन कर्मचारीहरूले उनीहरूको राहदानीमा 'प्रस्थान'को छाप लगाइदिए।
नेपाली विमानस्थलमा स्लोभिनियाको नागरिकका हैसियतमा आगमन र प्रस्थानको अनुमति पाएका ती चारै जनाले दुबईबाट भने युरोप जाने अनुमति पाएनन्।
दुबईस्थित अध्यागमन कर्मचारीहरूले उनीहरूलाई नेपालतर्फ फर्काइदिए।
उनीहरूले बोकेको स्लोभिनियाको राहदानी नक्कली भएको पत्ता लागेको थियो।
नेपाली अध्यागमन कर्मचारीहरूले भने दुबईबाट उनीहरूलाई नेपाल फर्काइएपछि मात्र त्यसको मेसो पाए।
तस्वीर कपीराइट DOI Nepal
त्यसपछि बल्ल उनीहरू स्लोभिनियाका नभई इरानका नागरिक भएको खुल्यो।
पक्राउ र स्वदेश फिर्ता
नाबालक सन्तानसहित नक्कली कागजपत्रका आधारमा नेपालको बाटो प्रयोग गरेर युरोप जान खोज्ने ती दम्पती इरानी नागरिक भएको पत्ता लागेपछि अध्यागमन विभागले पक्राउ गर्‍यो।
र, उनीहरूलाई आफ्नै देश इरान फर्काइदियो।
ती दम्पती मात्र होइनन्, नेपाल आएर यहाँबाट युरोप जानका लागि मध्यपूर्व वा भारतलाई 'ट्रान्जिट' बनाएका अरू इरानी नागरिकहरूलाई केही समययता लगातार नेपाल फर्काइन थालेको नेपालस्थित अध्यागमन अधिकारीहरू बताउँछन्।
गत वर्षको साउनदेखि गत चैतभित्र मात्र २१ जना इरानीहरूलाई नेपाल फर्काइएको अध्यागमन विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ।
त्यसरी फर्काइएकाहरू सबैले नेपालमा आउँदा र नेपालबाट जाँदा युरोपेली राहदानी प्रयोग गरेको पाइएको छ।
तर 'ट्रान्जिट'मा पुगेपछि कडाइ हुँदा भने उनीहरूले आफूहरूसँग भएको इरानी राहदानी देखाउने गरेको पाइएको अधिकारीहरू बताउँछन्।
अध्यागमन विभागका निर्देशक रामचन्द्र तिवारी भन्छन्, "नेपाल आउँदा युरोपेली मुलुकको नक्कली राहदानी प्रयोग गर्ने र त्यसैका आधारमा युरोपतर्फ जान खोज्ने प्रवृत्ति केही इरानीहरूमा देखिएको छ।"
उनले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न विभागले इरानी नागरिकलाई दिइने गरेको 'अन अराइभल' भिसामा कडाइ गर्न लागिएको जानकारी दिए।
"हामीले त्यसका लागि गृह मन्त्रालयलाई लेखेर पठाइसकेका छौँ," उनले भने, "मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्‍मा सिफारिस गरेपछि निर्णय हुनेछ।"
नेपाल आउँदा युरोपेली मुलुकको नक्कली राहदानी प्रयोग गर्ने र त्यसैका आधारमा युरोपतर्फ जानखोज्ने प्रवृत्ति केही इरानीहरूमा देखिएको छ।
रामचन्द्र तिवारी, निर्देशक, अध्यागमन विभाग
विभागका अनुसार गत वर्षको साउनयता २२ जना इरानी नागरिकहरूलाई निश्चित समय नेपाल प्रवेश गर्न नपाउनेगरी उनीहरूकै देश फर्काइएको छ।
तीमध्ये १३ पुरुष, सात महिला र दुई बालबालिका छन्।
बाइस जनामध्ये २१ जनाले नक्कली कागजात प्रयोग गरेको पाइएको छ।
नेपाल आउने अवैध आप्रवासीलाई कस्तो कारबाही?
इस्लाम परित्याग गरेर परिवारबाट भाग्ने यी साउदी युवती को हुन्
भागेर थाईल्यान्ड पुगेकी साउदी युवती अहिले के गर्दैछिन्
एक वर्षअघि पनि त्यस्तै आरोपमा ११ इरानी नागरिकलाई उनीहरूकै देश फर्काइएको अधिकारीहरूले बताए।
इरानी नागरिकले नक्कली कागजपत्र प्रयोग गरेर युरोप छिर्न नेपालको बाटो प्रयोग गर्दा नेपालको आन्तरिक सुरक्षामा समेत खतरा हुनसक्ने भएकाले यस्तो कदम चालिएको तिवारीले बताए।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले पनि इरानीहरूको गतिविधिमाथि शङ्का गर्दै अध्यागमन विभागले त्यस्तो प्रस्ताव पठाएको पुष्टि गरे।
उनले भने, "हामीकहाँ इरानी नागरिकलाई दिइँदै आएको अन अराइभल भिसा नदिने व्यवस्था गरिदिनु भन्ने प्रस्ताव आएको छ। हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयको राय मागेका छौँ। परराष्ट्रबाट आएपछि मन्त्रिपरिषद्‍मा पठाइनेछ।"
कुन देशका नागरिकलाई कस्तो भिसामा रोक लगाउने भन्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्‍बाट गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।
उनीहरू युरोपको राहदानी प्रयोग गर्छन्। त्यसलाई हेरेर हाम्रा अध्यागमन कर्मचारीले छाड्छन्
नरेश श्रेष्ठ, नेपालस्थित इरानका अवैतनिक दूत
मन्त्रिपरिषद्‌बाट इरानी नागरिकलाई अन अराइभल भिसा नदिने निर्णय भएमा त्यो नेपालमा यस्तो भिसा नपाउने १३औँ मुलुक हुनेछ।
विभागका अनुसार हाल नेपालले नाइजेरिया, घाना, जिम्बावे, स्वाजील्यान्ड, क्यामरुन, सोमालिया, लाइबेरिया, इथियोपिया, इराक, प्यालेस्टाइन, अफगानिस्तान र सिरियाका नागरिकलाई यस्तो भिसा दिन बन्द गरेको छ।
राहदानीबाहेक अरू 'ट्राभल डकुमेन्ट' सहित नेपाल प्रवेश गर्ने शरणार्थीले पनि यस्तो भिसा पाउँदैनन्।
Image caption अधिकारीहरूका अनुसार नेपालमा पक्राउ परेका केही इरानी नागरिकले धार्मिक कारणले इरान छोड्नुपरेको बताउने गरेका छन्
अन अराइभल भिसा दिन रोके पनि खासै फरक नपार्ने केहीको धारणा छ।
नियन्त्रणमा लिइएका इरानीहरूको अनुसन्धानका लागि दोभासे पनि बनेका नेपालका लागि इरानका अवैतनिक वाणिज्य दूत नरेश श्रेष्ठ भन्छन्, "उनीहरूले इरानी राहदानी प्रयोग गरेको भए पो यो रोकिन्थ्यो। उनीहरू त युरोपको राहदानी प्रयोग गर्छन्। त्यसलाई हेरेर हाम्रा अध्यागमन कर्मचारीले छाड्छन्।"
जानकारहरूका अनुसार अध्यागमन कर्मचारीको कमजोरी, जनशक्ति र प्रविधिको अभाव आदि कारणले इरानी मात्र नभई धेरै देशका नागरिकले नक्कली कागजपत्र लिएर यात्रा गर्ने सजिलो केन्द्रका रूपमा नेपाली विमानस्थललाई प्रयोग गर्ने गरेका छन्।
अध्यागमन अधिकारीहरू पनि त्यसलाई नकार्न भने सक्दैनन्।
"कतिपय अवस्थामा जनशक्ति अभाव र उच्च प्रविधिको अभावले हामीले सकेजति निगरानी गर्न नसकेको हुन सक्छ। तर हामी सूचनाका आधारमा पनि निगरानी गर्ने गर्छौँ" तिवारीले भने।
कसरी बन्छ नक्कली राहदानी
पक्राउ परेका इरानीहरूको अनुसन्धान गरेका अध्यागमन अधिकारीहरूका अनुसार उनीहरूले टर्की, थाईल्यान्ड र मलेशियाबाट नक्कली राहदानी बनाएको खुलेको छ।
इरानमै रहेका बेला इन्टरनेट वा फोनमार्फत् मानव ओसारपसारमा संलग्न व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क स्थापित गर्ने र ती मुलुकहरूमा पुगेपछि नक्कली युरोपेली राहदानी बनाउने गरेको देखिएको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूले जानकारी दिए।
विभागका निर्देशक तिवारीले पनि अनुसन्धानबाट इरानभन्दा अन्य मुलुकबाटै इरानीहरूले नक्कली राहदानी बनाएको खुलेको बताए।
"उनीहरूले धेरैजसो युरोपेली देशहरूको राहदानी बनाएर ल्याएको भेटिएको छ," विभागका निर्देशक तिवारीले भने।
उनका अनुसार त्यस्तो काम टर्की र अरू केही देशबाट हुने गरेको छ।
अनुसन्धानका क्रममा बयान लिँदा धेरै इरानीहरूले इरानबाट टर्की, थाईल्यान्ड वा मलेशिया जाँदा इरानी राहदानी नै प्रयोग गर्ने गरेको बताएका थिए।
तर ती देशमा नक्कली राहदानी बनाइसकेपछि चाहिँ त्यसमा भिसा लगाउनकै लागि नेपाल आउने गरेको पनि पाइएको छ।
दोभासेको काम गरेका श्रेष्ठका अनुसार उनीसँग पनि धेरैले नक्कली राहदानीमा जहाँ गएर भएपनि भिसा लगाएपछि युरोप जान पाइन्छ भनेर त्यसो गरेको बताएका थिए।
"नेपालमा आउँदा सहजै भिसा लाग्ने देखेरै धेरैले नेपाललाई आफ्नो गन्तव्य बनाएको पाइएको छ," श्रेष्ठले भने।
अधिकारीहरूका अनुसार इरानीहरूले पूर्वी युरोपका स्लोभिनिया, स्लोभाकिया आदि देश तथा अष्ट्रिया र स्पेनको समेत नक्कली राहदानी बनाएको पाइएको छ।
कतिपयले भने नेपालमा आएर शरणार्थीको रूपमा युरोप वा अमेरिका जान पाइन्छ भन्ने ठानेर पनि आएको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूले जानकारी दिए।
किन छाड्न चाहन्छन् इरान
नक्कली राहदानीसहित पक्राउ परेका इरानीहरूले अध्यागमन अधिकारीहरूलाई दिएको बयानमा धेरैले राजनीतिक अवस्थाका कारण इरान छाड्नु खोजेको बताउने गरेका छन्।
"इरानमा राजनीतिक स्वतन्त्रता छैन त्यसैले स्वतन्त्रता खोज्न हिँडेको भन्नेहरू धेरै भेटिन्छन्," अनुसन्धानमा प्रत्यक्ष संलग्न अध्यागमन विभागका एक अधिकारी भन्छन्, "खासमा उनीहरू आफ्नो र आफ्ना बालबालिकाको भविष्यप्रति चिन्तित भएर हिँडेको जस्तो देखिन्छ।"
ती अधिकारीको भनाइलाई दोभासेको काम गरेका श्रेष्ठले पनि पुष्टि गरे।
उनले भने, "उनीहरूले इरानको राजनीतिक अवस्थालाई दोष त दिने गरेका छन्, तर इरानमा उनीहरूले भने जस्तै अवस्था चाहिँ छैन।"
अधिकारीहरूका अनुसार केहीले भने धार्मिक कारणले पनि इरान छाड्नु परेको बताउने गरेका छन्।
त्यस्तो भन्नेहरूमा चाँहि इसाई, पारसी, बहाई र सुन्नी मुस्लिमजस्ता त्यहाँका अल्पसङ्ख्यक धार्मिक समुदायका मानिसहरू हुन सक्ने अधिकारीहरूको अनुमान छन्।
तर उनीहरूले ती धार्मिक कारणबारे खुलेर कुरा गर्न नखोजेको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूले जानकारी दिए।
इस्लामिक कानुन पालन गरिने इरानमा विशेषत: महिला र अन्य अल्पसङ्ख्यक धर्मका मानिसहरूमाथि ज्यादती हुने गरेका समाचार कहिलेकाहीँ सार्वजनिक हुने गर्छन्।
अध्यागमन विभागले पक्राउ परेका सबैजसो इरानीलाई उनीहरूकै देशमा फर्काइदिएको छ।
नेपालको अध्यागमन कानुनअनुसार नक्कली राहदानी लिएर यात्रा गर्नेहरूलाई २५ दिनसम्म हिरासतमा राखेर विभागले अनुसन्धान गर्न सक्छ।
त्यसपछि भने अदालतको आदेशले थुनामा पठाउने सकिने व्यवस्था छ।
यस्तो कार्य गर्नेलाई ५० हजार रूपैयाँ सम्म जरिवाना वा पाँच वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुन सक्छ।
तर हाल पक्राउ परेका धेरैलाई निश्चित समयसम्म नेपाल आउन नपाउनेगरी इरान फर्काउने गरिएको छ।
शरणार्थी तथा शरण माग्नेहरु